GLPI - Maareynta Bilaashka ah ee Beerta Kombiyuutarka | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan xiiseynayay inaan ka hadlo GLPI, tan iyo markii aan arkay maqaalka: osTicket: Nidaamka Tigidhada Furan ee ugu Fiican oo waxaan u arkaa mid xiiso leh inaan muujiyo beddelka nidaamyada tigidhada maaraynta shirkadaha iyo sidoo kale tan iyo markii aan u adeegsado maalin kasta tanina waa qayb ka mid ah dib u soo celinta adduunka ee isha furan. Sababtoo ah taasi waa tan ku saabsan, yeelashada waxyaabo kale oo wax ku biirin kara horumarka.
Waxaa xusid mudan in aanan isticmaalin nidaam kale oo tikidhada lagu isbarbar dhigo, marka waxaan kaliya diirada saari doonaa waxa GLPI sameeyo ee ma ahan waxa "tartanku" sameeyo.
1 Mashruuca GLPI
2 Noocyada Muhiimka ah
2.2 Soo bandhigida muuqaalka ee nooca cusub (9.2)
3 Sawirada nidaamka oo ficil ah.
5 Rakibida GLPI
GLPI waa Software Faransiis ah oo ay soo saartay INDEPNET si loo maareeyo ilaha xisaabinta oo si xoog leh ugu saleysan ITIL. Kuwa soo socda ayaa lagu dhajiyay bartooda:
GLPI waa Maamulaha Kheyraadka Macluumaadka oo leh isdhexgal maamul oo dheeri ah. Waad u adeegsan kartaa inaad ku sameysato keyd macluumaad oo ay ku kaydsan tahay shirkaddaada (kombiyuutarka, softiweerka, madbacadaha…). Waxay kor u qaadday astaamo si ay nolol maalmeedka ugu fududeyso maamulayaasha, sida nidaamka raadraaca shaqada oo leh ogeysiisyo emayl ah iyo qaabab loo abuuro xog-ururin leh macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan shabakadda shabakaddaada.
Hawlaha ugu muhiimsan ee arjiga waa:
Tirakoobka saxda ah ee dhammaan ilaha farsamada. Astaamaheeda oo dhan waxaa lagu keydin doonaa xog-ururin.
Maareynta iyo taariikhda falalka dayactirka iyo habraacyada la xiriira. Codsigan waa mid firfircoon isla markaana wuxuu si toos ah ugu xiran yahay isticmaalayaasha codsiyada u diri kara farsamayaqaanada.
Halkan waxaa ku yaal goobta GLPI Waxaa jira liistooyin aad u tiro badan, laakiin waxaan soo koobayaa kuwa ugu dhadhanka fiican uguna faa'iidada badan (dhammaantoodna ka soo jeeda bey'adayda iyo waaya-aragnimadayda).
100% Websaydh oo jawaab celin ah. Waxaa laga heli karaa biraawsar kasta oo wanaagsan. (haddii aysan ku shaqeyneyn biraawsarkaaga ka fiirso inaad u wareegto mid dhab ah)
Multi-dhan. Luuqado badan, isticmaale fara badan, shirkado badan (shirkado badan), nidaam aqoonsi badan (maxalli, LDAP, AD, Pop / Imap, CAS, x509…)
Maamul tirinta IT-ga otomaatig ah iyada oo loo marayo Waxyaabaha Fusion (Tirakoob otomaatig ah oo loogu talagalay Windows, MAC, Linux, Android, madbacadaha iyo mashiinnada dalwaddii ficil ahaan dhadhan ahaan u leh (laga bilaabo VmWare ilaa Hiper-V ilaa Libvirt). IThings lama taageerin, weli.
Gelinta barnaamijka softiweerka Waxyaabaha Fusion
Nidaamka raadinta ee xoogga badan iyo tuubbooyinka kumbuyuutarka.
Maamul tigidhada taageerada.
Awood u leh inuu hor istaago abuurista iyo la socoshada cusbooneysiinta tikidhada emaylka. (Haa, waad abuuri kartaa oo aad la macaamili kartaa dadka isticmaala dhamaadka adoo adeegsanaya emayl adigoon soo galin. Aad ayey faa'iido ugu leedahay dadka caajiska leh :-D)
Ogeysiisyada emaylka, ee loogu talagalay biraawsarka, ee la kala sooci karo AJAX iyo Telegram.
Taageerada tigidh otomaatig ah ama shirkad, shey alaabeed, juqraafi ahaan.
Saldhiga aqoonta isku dhafan. Intaa waxaa dheer, qodobbada tan ka soo baxa ayaa loo isticmaali karaa xalka tikidhada.
Warbixinno aasaasi ah oo horumarsan. Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa abuurista warbixinno khaas ah iyadoo la adeegsanayo SQL + PHP.
Ku dhowaad wax walba waa loo dhoofin karaa SVG, PDF, CSV iyo kuwa kale.
Isdhaafsiyo horumarsan oo loogu talagalay farsamayaqaannada iyo maamulayaasha iyo isdhexgalka la fududeeyay ee adeegsadayaasha dhammaadka la beddeli karo.
Kaydka iyo amaahda.
Lagu ballaarin karo plugins.
Soo bandhigida muuqaalka ee nooca cusub (9.2)
Sawirada nidaamka oo ficil ah.
Bogga internetka ee interface fudud.
Abuuritaanka tigidh ka socda websaydhka
Eeg isdhexgalka ka dhexeeya farsamayaqaannada iyo codsadayaasha.
Ogeysiiska emaylka. Template-ka asalka ah ee nidaamka la socdaa wuu siman yahay. Midka halkan ka muuqda waa midka kaas am waan shaqeyneynaa.
Qalabka Disk wuxuu la socdaa boqolkiiba isticmaalka. Tigidhada si otomaatig ah ayaa loo soo saari karaa marka isticmaalka uu ka gudbo xadka.
Liistada barnaamijyada rakibay.
Tigidhada la xidhiidha kooxda.
Aniguna waxaan u boodayaa Taariikhda.
Maaddaama isbeddeladani ay abuuri karaan ficillo otomaatig ah, tusaale ahaan: Ogeysiin emayl ah marka xaddiga xusuusta RAM uu is beddelo.
Iyo plugin My Dashboard oo bixisa macluumaad dheeri ah si aad u fiican oo nidaamsan, in kasta oo ay wax ka maqan yihiin.
Juquraafinta tikidhada iyo macaamiisha.
Kuwani inta badan waa howlaha inta badan aan isticmaalo, in kasta oo ay wax badani ka dambeeyaan. Waa mid aad loo habeyn karo oo wuxuu ku siinayaa samaynta bible.
Si adag markaan u hadlo, GLPI waxay ku shaqeysaa server kasta LAMP ama WAMP iyo xitaa mid ku saleysan IIS. Hadda waxaan ku dhex wadaa daruurta martigelin ku saleysan Cpanel ©.
MySQL ama MariaDB keydka macluumaadka
HTML bogagga shabakadda
Xaashida qaabka CSS
CSV, PDF iyo SLK ee dhoofinta xogta
AJAX ee walxaha firfircoon ee is-dhexgalka
SVG iyo PNG sawirada iyo sawirada
Waa tan liiska rasmiga ah ee shuruudaha.
In kasta oo ay jiraan xirmooyin qaar ka mid ah qaybinta Linux iyo dhadhanka rakibaadda ugu caansan ayaa ah inaad kala soo baxdo softiweerka oo aad kala furfurto galka ku yaal Webserver-kayaga. U habee macluumaadka oo si toos ah uga bilow rakibaadda biraawsarka.
Halkan waxaa ah fiidiyowga goobta http://canalti.blogspot.cl kaas oo sharxaya sida loo rakibo Install GLPI 0.90 & Fusion Inventory. Rakibaadda noocyada 0.9 ilaa noocyada cusub, illaa 9.2 waxba iskama beddeleyso.
Waqtigan xaadirka ah ku-biirinta barnaamijka ayaa naftayda u huray tarjumaadda Laatiin Isbaanishka iyo Isbaanishka Chili (tan dambe waxaan ahay tarjume TT-ga kaliya) maadaama aanan ahayn barnaamij-yaqaan.
Haddii kooramku buuxsamo, waxaa laga yaabaa inaan dhigno casharro si aan kor ugu qaadno barnaamijka softiweerka oo aan ula soconno xulashooyinka ugu wanaagsan ee aan kor ku soo sheegay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » GLPI - Maareynta Bilaashka ah ee Beerta Kombiyuutarka
Salaan kadib, nidaamkan maaraynta tigidhada waa mid aad ufiican, ikhtiyaar aad ufiican OStickets, waxaan filayaa inaad rakibtay nooca 9.2.1? Qalabka dashboardka iima uusan shaqeynin qeybta metrik sababo la xiriira cusbooneysiintii ugu dambeysay ee 9.1 ilaa 9.2, qoraaga ayaa sheegay in sababo la xiriira isbadal ku yimid aagga aan caadiga aheyn ee keydka keydka, ma waxaad ku guuleysatay inaad kor u qaaddo tabka "Metrics" nooca?, Waxaan la joogay 9.1.6 soo saarid ah "dhib", laakiin haddii kale waa hagaagsan tahay, waxaan ku haynaa 9.2 horumar la qabsi.
Jawaab Hector Rodriguez
Runtii cabbiraadu ma shaqeeyaan. Xakamaynta hantida ee sheyga Dashboard-ka ayaa sidoo kale joojiyay shaqadii 9.2.1.
Ku jawaab malditosudaka
Maqaal aad u fiican. Kaliya shahaado. Indepnet mas'uul kama aha GLPi. Tan iyo 2015, Teclib 'wuxuu la wareegay tifaftiraha rasmiga ah.
Ku jawaab TICgal
Maxay ahayd tabaruc wanaagsan, aad baad u mahadsan tahay.
Jawaab Rodolfo González
GLPI wax badan ayey hagaajisay tan iyo markii aan ku rakibey mid ka mid ah server-kayga! Uma isticmaalo nidaamka tikidhada maxaa yeelay waxay iila muuqataa mid aad iga gaabiya. Laakiin waxaan u maleynayaa in noocyada cusub ay leeyihiin API si ay ula falgalaan iyaga, taasi sax ma tahay? Tani waxay noqon laheyd mid aad u xiiso badan.
Ku jawaab Gaspar Fernández
Si aad ah uma sii gaabinayo Waxaan leeyahay isticmaalayaasha tikidhada ku abuura Email. Marka uma baahna inay galaan nidaamka.
maqaal aad u wanaagsan, waxaan la halgamayaa inaan ku xiro ldap-ka shirkadda ku jirta zentyal
Shirweynaha Caalamiga ah ee Tababarka E-Barashada - Shirka Chamilo